Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wakhtiga waarta » Isagoo ka jawaabaya Xeerka Cimilada Degdegga ah ee Cas
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Education • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Jabhada Malta • News • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
SUNx Malta ayaa maanta soo saartay warbixinteedii labaad ee sanadlaha ahayd Socdaalka Saaxiibtinimo ee Cimilada ka hor Shirka Glasgow COP 26 Cimilada. SUNx waa NGO ku saleysan Midowga Yurub oo loo aasaasay dhaxalka cimilada iyo raad-raacaha raad-raaca, Maurice Strong.
Warbixintu waxay muujinaysaa sii xoogeysiga masiibooyinka adduunka ee dabada ka riixaya iyo sida ay tani u saamayso waaxda Socdaalka & Dalxiiska ee dhaqaalaha adduunka.
Waxay ku baaqeysaa adkeysiga cimilada hadda ee Hawlaha Safarka & Dalxiiska.
Warbixintu waxay kaloo ku baaqaysaa in si cad loo yareeyo wasakhda iyo qorshayaasha waara ee ku salaysan sayniska, cimilada, iyo dalabaadka dhalinyarada.
Qorraxdax Warbixinta wuxuu ku baaqayaa DASH-2-Zero oo taageera Baaqa Dalxiiska ee Glasgow.
Iyada oo ku saleysan xogta cilmi -baarista ee la diyaariyey, Warbixintu waxay muujineysaa xoojinta masiibooyinka adduunka ka socda iyo sida ay tani u saameyneyso waaxda Socdaalka & Dalxiiska ee dhaqaalaha adduunka.
Warbixinta sidoo kale:
Wuxuu oggolaaday Baaqa Dalxiiska ee Glasgow wuxuuna ku boorinayaa DASH-2-Zero inuu qaato ballanqaadyada la sii ballaariyay oo si dhaqso leh u soo jeedinaya bartilmaameedyada qiiqa kaarboon laba ogsaydhka kaarboon ee 2030 iyo eber gaaska gaaska dabka ka baxa 2050.
Baaqyada loogu talagalay adkeysiga cimilada hadda ee Hawlaha Safarka & Dalxiiska, iyo sidoo kale cadaynta dhimista wasakhda iyo qorshayaasha joogtaynta ee ku salaysan sayniska, cimilada, iyo dalabaadka dhallinyarada.
Wuxuu tilmaamaa adeegyo taageero oo kala duwan oo la heli karo si looga caawiyo shirkadaha iyo jaaliyadaha inay ku socdaan waddada mustaqbalka socdaalka saaxiibtinimo leh.
Waxay bixisaa Diiwaanka Socdaalka Cimilada leh oo ku xiran Xariirka Waxqabadka Cimilada ee UNGlobal si ay uga caawiso daneeyayaasha dalxiiska inay diiwaangeliyaan hamiga cimilada iyo joogtaynta ayna muujiyaan horumar.
Wuxuu garwaaqsadaa danaha dhexe iyo doorka dhallinyarada ee wax ka qabashada dhibaatooyinka cimilada ee jira iyo sida ay dhallinyaradu u caawinayaan kor u qaadidda isbeddel wanaagsan guud ahaan waaxda Socdaalka & Dalxiiska.
Professor Geoffrey Lipman, Madaxweynaha SUNx Malta, iyo Madaxweynaha Shuraakada Cimilada & Dalxiiska Caalamiga ah (ICTP), wuxuu yiri, “Kuma faraxsanaanno kaliya inaan taageerno Baaqa Glasgow, laakiin waxaan rajeyneynaa in Warbixinta Socdaalka Cimilada ee Saxiibtinimo ay kicin doonto ficil dhab ah iyo jawaab togan oo ku aaddan baaqii Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Guterres ee ku aaddanaa Xeerka Cas ee Bani’aadamka, oo uu hoosta ka xariiqay IPCC 6 -dii dhowaan. Warbixinta Qiimeynta. Fikirkayaga Safarka Saaxiibtinimo ee Cimilada iyo wicitaankeena a DASH-2- Eber wuxuu u dhaqmi karaa sidii horseed u noqon lahaa isbeddel degdeg ah iyo marin -haweedka Qaramada Midoobay ee horseeday 2030/2050 Khariidadda Cagaaran iyo Nadiifsan ee mustaqbal wanaagsan.
“Qorraxx Malta ayaa iyaduna gooni u dhigtay Aragtida Tobanka sano, kaas oo bartilmaameedsanaya 10,000 oo shirkadood oo diiwaangashan iyo 1000 beelood marka la gaaro 2030 -ka, iyo sidoo kale 100,000 oo ah Horyaalka Cimilada si ay u taageeraan isbeddelka ”
Si aad u soo dejiso warbixinta, riix halkan.
Ku saabsan SUNx
SUNx waa urur ku salaysan Midowga Yurub, oo aan macaash doon ahayn, oo loo aasaasay dhaxal ahaan Maurice Strong, cimilada iyo hormuudka waaritaanka nus qarni ka hor. Waxaa iskaashi la leh Wasaaradda Dalxiiska Malta iyo Ilaalinta Macmiilka iyo Maamulka Dalxiiska.
SUNx Malta waxay abuurtay 'Nidaam Socdaal Saaxiibtinimo leh Cagaar & Nadiif, Cimilada' si ay uga caawiso Shirkadaha Safarka & Dalxiiska iyo bulshooyinka inay u beddelaan Dhaqaalaha Cimilada cusub. Barnaamijku wuxuu ku salaysan yahay yareynta kaarboonka, la kulanka Yoolalka Horumarinta Joogtada ah, iyo iswaafajinta dariiqa Paris 1.5C. Waa ficil iyo waxbarasho diiradda saareysa - taageeridda shirkadaha maanta iyo bulshooyinka si ay u gaarsiiyaan himilooyinkooda cimilada iyo dhiirri -gelinta hoggaamiyeyaasha dhallinyarada ee berrito inay u diyaargaroobaan shaqooyinka abaal -marinta ee dhammaan waaxda Socdaalka.
Qatar Airways waxay dib u soo celinaysaa A380s xilliga qaboobaha